Cyclamen | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hitomboan'ny cyclamen any an-trano
Cyclamen (Cyclamen - avy amin'ny teny grika. Cyclos - boribory) - trano fambolena tokana avy amin'ny fianakaviana Primula (latinina Primulaceae). Ny tanin'ny cyclamen dia Eoropa Afovoany sy Azia Minora. Vao haingana, ireo botaney dia namaritra karazana zavamaniry vaovao hita any amin'ny morontsirak'i Mediterane, Caspian ary ny Black Sea.
Inona ireo zavamaniry ao an-trano mety tsara ho an'ny efitranonao
Ny efitrano fandriana dia toerana feno fahasambarana izay mitaky toe-javatra manintona manokana, ilay tadiavinao hiditra ao amin'ny zoro manokana anao. Tsy ampy ny trano sy trano fandroana ary fitaovana hafa, ary mila manamboatra efitra fatoriana ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe inona ny zavamaniry azo atao ao amin'ny efitrano fandriana sy ny fomba hikarakarana tsara azy ireo.
Inona no manampy ny cyclamen?
Ny vanim-potoana mangatsiaka dia mitondra foana ny aretina sy ny valanaretina. Tsy maintsy mividy zava-mahadomelina ao amin'ny pharmacy isika, izay lafo vidy. Azonao atao anefa ny mampiasa ny fomba fitsaboana nentim-paharazana, izay namonjy ny fahendrena nandritra ny an'arivony taona maro ary na amin'izao fotoana izao aza, amin'ny taom-pianarana momba ny famatsiam-bola dia mizara izany amin'ny rehetra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Cyclamen